Firaisamben’ny Skotisma eto Madagasikara : voin-kava-mahatratra ho an’ny traboina | NewsMada
Firaisamben’ny Skotisma eto Madagasikara : voin-kava-mahatratra ho an’ny traboina
“Havan’ny olona rehetra ny Skoto ”. Lohahevitra entin’ny skoto amin’ny tolotanana ho an’ny traboina vokatry ny fandalovan’ilay rivoza Enawo io. Mandeha ny fanentanana amin’ny alalan’ny filoham-paritany, filohan’ny diosezy, filohan’ny faritra mba hanetsika avy hatrany ireo mpikambana Skoto manerana ny Nosy handray anjara amin’ny fanarenana ny firenena.
Mila mifanatona haingana amin’ny tompon’andraikitry ny BNGRC ao anatin’ny faritra misy azy avy ny foibe sy ny filoha ary ny ekipa mpiray dia isam-paritany. Mandeha mijery ary handray anjara amin’ireo asa maika izay tokony hifarimbonana.
Tokony samy hanangona izay voatsirambin’ny tanana ny isam-pivondronana, eo ambany fitarihan’ny filohan’ny komitim-pivondronana sy ny toniam-pivondronana, ary ireo olon-dehibe rehetra ao anatin’ny fikambanana. Anisan’izany ny tenin’Andriamanira, fitafiana, sakafo, fitaovana fampiasa ao an-tokantrano, vola ….
Aterina any amin’ny biraon’ny BNGRC akaiky azy indrindra ny fanampiana voaangona. Ho an’ny eto Antananarivo sy ny manodidina, hisy ny hetsika fanangonana faobe ireo fanomezana hotanterahina eo anoloan’ny Tranompokonolona , anio. Hatao ny alarobia izao kosa ny fanaterana izany eny amin’ny foiben-toeran’ny BNGRC.
Miantsehatra eny ifotony
Ho an’ireo tanora mpikambana mihoatra ny 18 taona (beazina, mpanabe …), mila mifarimbona amin’ny tompon’andraikitra isaky ny fokontany, kaominina, distrika, faritra amin’ny fanampiana ireo olona traboina hamonjy ny toerana izay voatokana handraisana azy ireo. Jerena ny sehatry ny fahadiovana sy fananganana ny tranoheva ary famerenana haingana ireo lalana na tetezana tapaka taorian’ny fandalovan’ny rivodoza …
Ho an’ireo ankizy mpikambana latsaky ny 18 taona na koa ireo ray aman-dreny (komity, tranainy, sakaiza), entanina mba hanamafy ny asa soa izay efa fanaontsika isan’andro (farafahakeliny indroan’izay fanao, ny mihoatra tsy ferana). Kendrena mba hafantoka manokana amin’ireo havana traboina izany asa soa izany.
Ho an’ireo mpanofana sy mpanampy mpanofana, tokony hohamafisina mandritra izao vanim-potoana fandalovan’ny rivodoza izao ny fanaovana fiofanana isam-paritany na isam-paritra eny isam-pivondronana mihitsy aza mahakasika ireo zavatra izay tokony hatao mialoha, mandritra ary aorian’ny rivodoza.